Raw Methenolone Enanthate vovoka mpanamboatra & mpamatsy - orinasa
Vovon-tsolosaina roan-taolana mena (303-42-4)
Ny metenolone enanthate, na ny methenolone enanthate, dia androgen sy anabolic steroid (AAS) fanafody izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny anemia noho ny tsy fahombiazan'ny tsoka. Azo ampiasaina ihany koa izy io mba hanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao.
Vovon-tsakafo roan-taolana (303-42-4)
Vovon-tsolosaina roan-taolana mena (303-42-4) Description
Ny vovon-tsolosaina roatin-davenona (fantatra amin'ny anarana hoe primobolan depot) dia steroids anabolic inabolic izay mampiseho toetra marefo anabolika sy ambany, ary ny dihydrotestosterone (DHT). Ny Estera enanthate dia mamorona toe-javatra iray izay mahatonga ny fihenan'ny tsimokaretina amin'ny tsindrona steroid sy ny fijanonana ambony mandritra ny roa herinandro. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny areti-mandringana, ny osteoporose sy ny sarcopenia ary ny fatran'ny corticosteroid maharitra. Amin'ny tranga sasany, dia mahomby amin'ny fitsaboana amin'ny karazana ary hepatita. Natao hampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny 1962 ny enetenhate Metenolone. Azo ampiasaina ihany koa izy io mba hanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao.
Vovon-tsakafo roan-taolana (303-42-4) Specifications
Product Name Vovon-tsakafo roan-taolana
Anarana simika Primobolan depotDelapromor, Methenolone enanthat
molekiolan'ny Formula C27H42O3
molekiolan'ny Wvalo 414.62
mitsonika Point 67 ° C ~ 68 ° C
Ny antsasaky ny biolojia IM: 10.5 andro
Solubility tsy misy rano
Azo alaina amin'ny metanol sy chloroform
Application Anabolic anabolic and androgenic.
Inona no atao hoe vovobon-koditra mena metenolone (303-42-4)?
Ny vovonan'aretin-tsolika miontokely (fantatra amin'ny anarana hoe primobolan depot) dia steroids anabolika mipetrapetraka izay mampiseho toetra marefo anabolika sy ambany, ary an'ny vondrona dihydrotestosterone (DHT). Ny Estera enanthate dia miteraka toe-javatra iray izay mahatonga ny fihenan'ny tsimokaretina amin'ny steroid sy ny fijanonana ambony mandritra ny roa herinandro. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny areti-mandringana, ny osteoporose sy ny sarcopenia ary ny fatran'ny corticosteroid maharitra. Amin'ny tranga sasany, dia mahomby amin'ny fitsaboana amin'ny karazana ary hepatita. Natao hampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny 1962 ny enetenhate Metenolone. Azo ampiasaina ihany koa izy io mba hanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao.
Ny fomba fanondranana vovoantangom-bolon-koditra roatine (303-42-4) asa
Ny Methenolone Enanthate dia steroïdio misy tsiranoka izay miasa amin'ny fanatsarana ny toetra anabolika sy farafahakeliny tsy dia tsara loatra. Izy io dia miasa amin'ny fametrahana toe-javatra iray izay mitombo ny fifantohana amin'ny steroid ary mitoetra ao mandritra ny roa herinandro. Izany dia mahatonga azy ho vahaolana tsara ho an'ireo izay maniry ny hampiroborobo ny fiheveran-tenany amin'ny steroid ary hitazona izany mandritra ny fotoana maharitra. Io endri-tsoratra mipetaka amin'ny methenolone io dia malaza noho ny fahombiazany sy ny fahombiazan'ny lehilahy izay te-hanangana ny vatany amin'ny dosage avo lenta.
Vovon-tsakafo roan-taolana (303-42-4) Dosage
Ny dosia ho an'ny dika-be amin'ny promobolin dia tokony ho dosage voalohany amin'ny 200mg, avy eo dia isaky ny 100mg isan-kerinandro hatramin'ny faran'ny fitsaboana. Ny fampiasana kosa dia miankina amin'ny toe-pahasalaman'ny mpampiasa. Afaka mandeha mankany 100mg ny 1 tsirairay ka hatramin'ny herinandro 2 na 200mg aorian'ny 2 hatramin'ny herinandro 3. Izaho dia mifototra amin'ny steroid fototra toy ny steroid, ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa farafaharatsiny 400gm isan-kerinandro na vokatra tsara indrindra. Raha mitady vaksinin'ny Primobolan fotsiny ny olona iray, dia azo ekena na azo ekena ny dosage ambony. Ny ankamaroan'ny olona dia mandeha amin'ny 750 amin'ny 1000mg isan-kerinandro. Misaotra noho ny toetra malemy, dia mbola azo zakaina ihany ny dosage avo lenta raha tsy misy fiantraikany ratsy.
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny Primobolan (metenolone enanthate) dia ny fahavoazana matavy. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny famoahana tsingerina izay tena mahakasika ny fatiantoka matavy mandritra ny vanim-potoana tsingerin'ny kalesy. Noho izany, ny mpampiasa dia afaka manantena ny hahita fiovana lehibe eo amin'ny fiasan'ny fatotra. Tsara ihany koa ny mitazona ny lefom-pandehan'ny tebiteby izay manjaka amin'ny bodybuilders.
Ny fitomboan'ny taova
Na dia zara raha ampiasaina amin'ny tsingerim-bolana aza, ny mpampiasa dia afaka manantena ny hahita fitomboan'ny hozatra. Mety ho fanafody mahafa-po izany, indrindra rehefa voapoizina amin'ny steroids hafa ary rehefa ampiasaina amin'ny dosie avo.
Ity asa miafina ity dia amin'ny fampiroboroboana ny fifandanjana azota ao anatin'ireo hozatra. Ny rivotra dia tena zava-dehibe ho an'ny fitomboan'ny taova sy ny fikojakojana. Arakaraky ny hitomboan'ny vozona dia misy ny hozatra, ny ambony dia ny fahafahana manatsara kokoa ny hozatra. Ny vatany dia mila nitroka amin'ny fampifangaroana ireo vozona vaovao, ary miaraka amin'ity steroid ity, ny vatana dia afaka mahazo ny azota betsaka araka izay ilainy. Afaka manampy ny mpampiasa hanangana ny hozatry ny leo kely izy ireo, indrindra raha manao izany ho fampisehoana na fifaninanana. Na dia izany aza, ny olona dia tsy tokony hanantena fa ity vokatra ity dia hanampy azy ireo hanangona ampahafolo mitovy amin'izay mety amin'ny steroid hafa ry zareo saingy afaka miantehitra aminy izy ireo amin'ny fananganana ny hozatra madinika kely raha ampiasainy araka izay tokony ho izy.
Fanamafisana ny hery fanefitra
Rehefa mieritreritra ny fitsaboana anabolika ny olona, ​​dia matetika izy ireo no mifantoka kokoa amin'ny voka-dratsiny sy ny fiantraikany eo amin'ny rafi-kery. Vitsy no nieritreritra ny vokatra tsara izay mety ho an'ny steroids amin'ny rafitra fiarovan'ny vatana. Manatsara ny fomba fiainana madio sy voalanjalanja i Primo. Ny rafitra fiarovana dia manan-danja raha ny mahasamihafa azy no manampy amin'ny fiarovana ny vatana amin'ny aretina rehetra. Manampy amin'ny fanamafisana ny fitambaran'ny sela ny fototarazon'ny metenolone izay ahitana ny sela fotsy, izay ampahany manan-danja amin'ny rafi-kery.
Fanampiana amin'ny fiarovana ny hozatra
Ny steroid dia tsy manampy amin'ny fandoroana ny tavy sy ny taolam-paty, fa mamela ny mpampiasa hihazona ny hozatry ny fo koa. Ny bodybuilder tsirairay dia mikendry ny handorana ny tavy, hitahiry tavy ary raha azo atao ny manangana zavatra bebe kokoa. Ny olana dia tonga rehefa miezaka ny mandoro satria tsy maintsy mandalo ny tsy fahampian-tsakafo izay midika fa mila mandoro bebe kokoa ny matavy noho ny fidirany. Raha misy ny fanavakavahana, ny vatany dia hiafara amin'ny fihinanana ny hozatra izay mety mahakivy . Amin'ny primi, tsy misy izany satria fiheveran'ny steroid anti-catabolic izay tsy hijanona hozatra ny hozatry ny foza.
Buy Buy Methenolone Enanthate from Buyase.com
IK Morton; Judith M. Hall (6 Desambra 2012). Didy manan-danja amin'ny toeram-pitsaboana ara-pahasalamana: Properties and Synonyms. Springer Science & Business Media. pp. 178.
JUCKER '' Fandrosoana amin'ny fikarohana fanafody / Fortschritte der Arzneimittelforschung / Progrès ...
K. Morton, Judith M. Hall. '' Didy manan-danja amin'ny toeram-piasana ara-panafody: Properties and Synonyms natontan'i Detlef Thieme, Peter Hemmersbach. '' doping amin'ny fanatanjahantena. '
Larry Jameson; Leslie J. De Groot (25 Febroary 2015).Endocrinology: Adult and Pediatric E-Book. Elsevier Health Sciences. pp. 2388.
Vovon-ketsa vita amin'ny methénolone (434-05-9)